ဂျာမနီ - အများပိုင်သတင်း။ အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B Marketplace သတင်း
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဧပြီလ 11, 2021 ဧပြီလ 10, 2021 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
Donbas ဒေသတွင်တင်းမာမှုများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသည်။ ယူကရိန်းအနေနှင့်ယူကရိန်းအာဏာပိုင်များ၏မူဝါဒကိုအမေရိကန်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးမည်သည့်နိုင်ငံကမျှယူကရိန်းအစိုးရအပေါ်တိုက်ရိုက်လွှမ်းမိုးမှုမရှိဘဲအမေရိကန်အစိုးရဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ယူနိုက်တက်စတိတ်နှင့်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတို့ကယူကရိန်းကိုအပြည့်အဝထောက်ခံကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။
မတ်လ 23, 2021 မတ်လ 22, 2021 Stephanie Snyder	မှတ်ချက် Leave
ဖောက်သည်များ၏ကန့်ကွက်မှုသည်အဓိကအားဖြင့်ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သောစက်မှုလုပ်ငန်းများအပါအ ၀ င်ရောင်းအားတွင်အများဆုံးဖြစ်သည်။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူသည်စိတ်ဝင်စားမှုလျော့နည်းခြင်းသို့မဟုတ်ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကို ၀ ယ်ရန်ဆန့်ကျင်လိုခြင်းမရှိခြင်းကိုဖော်ပြသည့်ကန့်ကွက်မှုများတွင်ဖော်ပြချက်များသို့မဟုတ်မေးခွန်းများပါ ၀ င်သည်။ ဖောက်သည်များ၏ကန့်ကွက်မှုများကိုကောင်းမွန်စွာဖြေရှင်းရန်စွမ်းရည်သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကြားတွင်အရေးကြီးသောကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်သည်။
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 28, 2021 မတ်လ 1, 2021 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
Alexei Navalny သည်တနင်္ဂနွေနေ့မော်စကိုမြို့အရှေ့ဘက်ကီလိုမီတာ ၂၀၀ အမြင့်တွင်ထောင်ဒဏ်ကျခံရမည့်ထောင်သို့ရောက်ရန်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ မော်စကိုပြည်သူ့စောင့်ကြည့်ရေးကော်မရှင်ကကြေငြာချက်တစ်ခုတွင်ပြောကြားခဲ့သည် Alexei Navalny သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည် ဗလာဒီမာဒေသတွင်း၌ရုရှားpenitentiaryန်ဆောင်မှုတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်း။
ရုရှား - ဥရောပလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာအယူခံဝင်သော်လည်း Navalny ကိုတရားစီရင်ခဲ့သည်
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 21, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 21, 2021 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
ဗလာဒီမာပူတင်ရဲ့အဓိကပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ Alexei Navalny ကိုရုရှားကဆုံးဖြတ်လိုက်သည် အရက်ဆိုင်နောက်ကွယ်မှရှိနေသင့်တယ်။ ပူတင် ဦး ဆောင်သောအစိုးရသည်ရုရှားမီးသတ်တံဆိပ်အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးသမားအားလွတ်မြောက်ရန်ယုံကြည်မှုမရှိခြင်းကြောင့်နိုင်ငံတကာဖိအားနှင့်ဥရောပလူ့အခွင့်အရေးတရားရုံးမှနိုင်ငံရေးသမားအားချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြင့်လွတ်မြောက်ရန်တောင်းဆိုမှုသည်နားမကြားခဲ့ရသည်။
ရုရှားက Demuri Voronin ကိုနိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုထားသည် Voronin သည်ရုရှားနှင့်ဂျာမနီ၏နိုင်ငံသားဖြစ်သည်။ ဂျာမနီကသူ့ကိုကူညီရန်တက်ကြွသောချဉ်းကပ်မှုယူရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ရှင်းနေသည်မှာရုရှားနိုင်ငံသား Alexei Navalny ကိုဂျာမနီကသူ့ကိုကူညီခဲ့ပြီးဂျာမနီ၌ Navalny နေထိုင်စဉ်ကသူ့ကိုဂျာမန်လုံခြုံရေး ၀ န်ဆောင်မှုများပေးခဲ့သည်။
ပူတင် - အနောက်သည် Navalny ကို“ ထိန်းသိမ်းရေးမူဝါဒ” အဖြစ်အသုံးပြုသည်။
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 14, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 15, 2021 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကတနင်္ဂနွေနေ့တွင်အနောက်နိုင်ငံများအားလက်ရှိအကျဉ်းကျခံနေရသောအတိုက်အခံနိုင်ငံရေးသမားအဲလက်ဇ်နာဗယ်လ်နီအားရုရှား၏ထိန်းချုပ်ရေးမူဝါဒ၏အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်ဟုစွပ်စွဲခဲ့သည်။ သူကစောဒကတက်သည်မှာ“ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပိုမိုအားကောင်းလေ၊
Volkswagen, ကိုယ်ပိုင်ကားမောင်းကားများပေါ်တွင် Microsoft အဖွဲ့
ဂျာမန်ကားထုတ်လုပ်သူ Volkswagen AG ကမူကားမောင်းခြင်းဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုပိုမိုအားကောင်းစေမည်ဖြစ်ပြီး cloud နည်းပညာတွင်မိုက်ခရိုဆော့ဖ်နှင့်ပူးပေါင်းမှုတိုးချဲ့မည်ဖြစ်ပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကိုယ်ပိုင်မောင်းနှင်မှုအတွေ့အကြုံများကိုပိုမိုမြန်ဆန်စေရန်၎င်း၏ကွန်ပျူတာနှင့်ဒေတာလုပ်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
Rolls-Royce သည် COVID19 ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအားတုန့်ပြန်မှုအတိုချုပ်ကြေငြာခြင်းကိုကြေငြာခဲ့သည်
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 7, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 7, 2021 Doris Mkwaya	မှတ်ချက် Leave
Rolls-Royce သည်၎င်းတို့၏ဂျက်အင်ဂျင်စက်ရုံများကိုခေတ္တ ၂ ပတ်ခန့်ခေတ္တပိတ်ထားရန်စီစဉ်နေသည် ဒီငွေဟာချွေတာဖို့အတွက် Covid-1980 အပေါ်စက်မှုလုပ်ငန်းအပေါ်သက်ရောက်မှုများကြောင့် ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်အများပိုင်ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှ၎င်းသည်ကြီးမားသောဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ကိုယ်စားပြုခြင်းဖြစ်သည်။
ရုရှားသံတမန်သုံး ဦး ကို Boot တက်
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 6, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 7, 2021 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
ကရင်မလင်ကကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုအပြီးတွင်သံတမန်သုံး ဦး အားဖေဖော်ဝါရီ ၅ ရက်တွင်ရုရှားမှထွက်ခွာရန်အမိန့်ပေးခဲ့သည်ဟုကြေငြာခဲ့သည် ထုတ်ပယ်ခံရသည့်သံတမန်များမှာဆွီဒင်၊ ပိုလန်သမ္မတနိုင်ငံနှင့်ဂျာမနီနိုင်ငံများဖြစ်သည်။ ဘယ်အချိန်လဲ Alexei Navalny သူနဲ့အဖွဲ့ကရုရှားလမ်းတွေကိုသွားပြီးဆန္ဒပြဖို့လူထုကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
ဇန်နဝါရီလ 26, 2021 ဇန်နဝါရီလ 27, 2021 Doris Mkwaya	မှတ်ချက် Leave
ဥရောပဗဟိုဘဏ်ဥက္ကPresident္ဌ Christine Lagarde ကပြောကြားသည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်စတုတ္ထသုံးလပတ်မှစီးပွားရေးအချက်အလက်များ ယူရိုဇုန်၏စီးပွားရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သည်ကိုပြသခဲ့သည် Lagarde သည်ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ်ဆွေးနွေးပွဲ (Davos Agenda) ၏ ၂၅ ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးတွင်ဤမှတ်ချက်ကိုပြောကြားခဲ့သည်။
ဇန်နဝါရီလ 24, 2021 ဇန်နဝါရီလ 24, 2021 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
ယူအက်စ်အေနှင့်ဥရောပသမဂ္ဂတို့သည်ရုရှားလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များအားအတိုက်အခံအကြီးအကဲ Alexei Navalny ကိုလွှတ်ပေးရန်ဆန္ဒပြသူများအပေါ်အကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်မှုများအားပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်သည်။ Navalny ကိုခြွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးရေးအတွက်နိုင်ငံအဝှမ်းလမ်းများပေါ်သို့ဆန္ဒပြသူများကိုဆန္ဒပြသူများအပေါ်ရုရှားလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များ၏ရက်စက်စွာပြုမူမှုများ
ဇန်နဝါရီလ 24, 2021 ဇန်နဝါရီလ 24, 2021 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
ဇန်နဝါရီလ 23, 2021 ဇန်နဝါရီလ 30, 2021 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
AliExpress သည်ရုရှားနှင့်ယခင်ဆိုဗီယက်အဖွဲ့၏နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသောနိုင်ငံများတွင်ထင်ရှားသည်။ drop-shoppers များသည် AliExpress မှထုတ်ကုန်များကိုရယူသည်။ ရုရှား၌ကိုယ်ပိုင်စျေးကွက်ရှိသည့် Wildberries ရှိသည်။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က Wildberries ဈေးသည်ဂျာမနီသို့တိုးချဲ့မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
Bulk Candy ကို The Globe နှင့် eBay သို့ရောင်းပါသို့မဟုတ် Amazon တောင်မှ ၀ ယ်ပါ - Sweet Deal
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇန်နဝါရီလ 21, 2021 ဇန်နဝါရီလ 21, 2021 လက်ကားနှင့် B2B သုံးသပ်ချက်များ
လွန်ခဲ့သောလအတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင် သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက် - သင်၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအွန်လိုင်းလက်ကားစျေးကွက်အသစ် - သည်သင်မတတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းများဖြင့်သင်လိုချင်သည့်နာမည်ကြီးအမှတ်တံဆိပ်ထုတ်ကုန်များကို eBay အားမည်သို့ပေးသည်ကိုပြသသည်။ ရောင်းသူအသစ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် လက်ကား B2Bဤ ၀ ယ်လိုအားကောင်းသောအမေရိကန်ထုတ်ကုန်များကိုသင်၏ဆိုင်များတွင်ရောင်းရန်သင့်အားကူညီနိုင်သည်။
ရုရှားဆန့်ကျင်သူ Navalny သည်မော်စကိုသို့ရောက်ရှိစဉ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်
Alexei Navalny သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်သြဂုတ်လကအဆိုးရွားဆုံးကရင်မလင်ကိုဝေဖန်ခဲ့သည်။ ဆင်းသက်ပြီးနောက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည် ဒီတနင်္ဂနွေမော်စကိုရှိ Sheremetyevo လေဆိပ်မှာ။ ယခင်ကသူသည်လေယာဉ်မှူး Vnukovo လေဆိပ်မှပြောင်းရွှေ့ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူသည်သူဆင်းသက်သင့်သည့်နေရာနှင့်ရာပေါင်းများစွာသောထောက်ခံသူများသည်သူ့ကိုအိမ်ပြန်ရန်ကြိုဆိုရန်စိတ်အားထက်သန်နေကြသည်။
Shop The Globe ရှိထုတ်လုပ်သူများထံမှတိုက်ရိုက်မျက်နှာဖုံးပါ
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇန်နဝါရီလ 18, 2021 ဇန်နဝါရီလ 17, 2021 လက်ကားနှင့် B2B သုံးသပ်ချက်များ
ထုတ်လုပ်သူများထံမှတိုက်ရိုက် ၀ ယ်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုလူသိများသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင် ယခင်ကထက်ပိုမိုလွယ်ကူစေခဲ့သည်။ Shop The Globe သည်တိုက်ရိုက် - ထုတ်လုပ်သူမှ ၀ ယ်ယူခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုပေးသည်။ သင့်အားသင်လိုချင်သည့်ပစ္စည်းများကိုစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ရောင်းချပေးသည်။ အရောင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပိုမိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး၊ စားသုံးသူနှင့်ထုတ်လုပ်သူများအကြားပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်နွယ်မှုရှိသည်။
ရုရှား - ထိန်းသိမ်းခံထားရသော Navalny ၏အနာဂတ်ကားအဘယ်နည်း။
ဇန်နဝါရီလ 17, 2021 ဇန်နဝါရီလ 17, 2021 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
Alexey Navalny သည် ၂၀၂၁၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၇ ရက်တွင်ရုရှားသို့ပြန်လာသည်။ လေယာဉ်သည် Pobeda (Victory) ၏တန်ဖိုးနည်းလေကြောင်းလိုင်းဖြစ်သည်။ လေယာဉ်ပေါ်မှပျက်ကျခဲ့သောခရီးသည် (Navalny သို့မဟုတ်သူ၏ပတ် ၀ န်းကျင်မဟုတ်) ကြောင့်လေယာဉ်နောက်ကျခဲ့သည်။ လေယာဉ်ထိုင်ခုံအများစုမှာသတင်းသမားများဖြစ်သည်။
ဇန်နဝါရီလ 17, 2021 ဇန်နဝါရီလ 17, 2021 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
အီရန် - အိုင်အေအီးအေသည်နောက်ထပ်အီရန်နျူကလီးယားဖောက်ဖျက်မှုအားကြေငြာခဲ့သည်
ဇန်နဝါရီလ 17, 2021 ဇန်နဝါရီလ 17, 2021 Samuel Gush	မှတ်ချက် Leave
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုမြူစွမ်းအင်အေဂျင်စီ (IAEA)၊ ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီသည်အီရန်နှင့်အခြားနိုင်ငံများအနေဖြင့်နျူကလီးယားစွမ်းအင်ကိုငြိမ်းချမ်းသောနည်းလမ်းများဖြင့်အသုံးပြုရန်သေချာစေရန်တာဝန်ရှိသည် ကြေညာလိုက်ပါတယ် တီဟီရန်သည်ယူရေနီယမ်သတ္တုထုတ်လုပ်ခြင်းအားဖြင့်လမ်းညွှန်ချက်များကိုချိုးဖောက်ခဲ့သည်
တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဈေးနှုန်းများ eBay ကိုတစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှုပစ္စည်းများဝယ်ပါ
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇန်နဝါရီလ 14, 2021 ဇန်နဝါရီလ 14, 2021 လက်ကားနှင့် B2B သုံးသပ်ချက်များ	မှတ်ချက် Leave
တစ်လအကြာ, ငါတို့မှာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင် ဖောက်သည်များနှင့်လက်လီရောင်းချသူများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နာမည်ကြီးအမေရိကန်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ထုတ်ကုန်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ရောင်းချသူအသစ်မှတစ်ဆင့်မည်သို့ဝယ်နိုင်သည်ကိုပြသခဲ့သည်။ လက်ကား B2B, သူတို့ရဲ့စျေးဆိုင်နှင့်သင်၏ရောင်းရန်။ ကျနော်တို့ပေးတဲ့ဥပမာကတော့တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းတွေပါ။ နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးနှုန်းများသည်ပြိုင်ဆိုင်မှုနှင့်အထူးသဖြင့် eBay နှင့်မည်သို့နှိုင်းယှဉ်ကြောင်းထပ်မံပြရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
Shop the Globe and Save မှထုတ်လုပ်သူများထံမှတိုက်ရိုက်ဝယ်ယူပါ
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇန်နဝါရီလ 11, 2021 ဇန်နဝါရီလ 10, 2021 လက်ကားနှင့် B2B သုံးသပ်ချက်များ	မှတ်ချက် Leave
Shop the Globe တွင်သင်ထုတ်လုပ်သူများထံမှတိုက်ရိုက်သင်လိုချင်သည့်ပစ္စည်းများကိုစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် ၀ ယ်ရန်ယခင်ကထက်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ အချိန်တိုအတွင်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားအများနှင့်ဖွဲ့စည်းထားသောလက်ကားရောင်းဝယ်မှုများထက်အင်္ဂါရပ်များနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်များပိုမိုပေးစွမ်းနိုင်ပြီးနာမည်ကျော်လေလံပွဲတစ်ခု၏စျေးနှုန်းများကိုပြတ်ပြတ်သားသားကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့သည်။
ဇန်နဝါရီလ 8, 2021 ဇန်နဝါရီလ 8, 2021 ဂျော့ခ်ျ Mtimba	မှတ်ချက် Leave
Semiconductor ပစ္စည်းများရှားပါးမှုကြောင့် Nissan သည်ကားထုတ်လုပ်မှုကိုလျှော့ချခဲ့သည်။ ဂျပန်ကုမ္ပဏီလုပ်လိမ့်မည် မှတ်ချက် - ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောကားများ၏ထုတ်လုပ်မှုကို ၅၀၀၀ စီးလျှော့ချနိုင်သည် ဖေဖော်ဝါရီလ မှစတင်၍ ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဇန်န ၀ ါရီလတွင်ထွက်ရှိမှုလျော့ကျရန်မျှော်လင့်ရသည်။
ဘီလာရုစ် - အစိုးရ ထွက်ခွာခကောက်ခံခြင်း၊ မသန်မစွမ်းမှုများသည်အခြားနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးသည်
ဇန်နဝါရီလ 8, 2021 ဇန်နဝါရီလ 8, 2021 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
ဘီလာရုစ်နိုင်ငံသည်နိုင်ငံသားများကိုတိုင်းပြည်မှထွက်ခွာခပေးရန်နိုင်ငံသားများအားစတင်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ သတင်းအချက်အလက်များကိုဘီလာရုစ်အမျိုးသားဥပဒေရေးရာပေါ်တယ်တွင်ဖော်ပြထားသော“ အခွန်စည်းမျဉ်းဥပဒေကိုပြင်ဆင်ခြင်းများ” တွင်ရရှိနိုင်သည်။ အလေးချိန် ၅ တန်အထိရှိသောယာဉ်မောင်းများနှင့်ခရီးသည်ရှစ်ယောက်အထိစွမ်းဆောင်နိုင်သောယာဉ်မောင်းများသည်ငွေပေးချေရလိမ့်မည်။
The Globe Beats eBay ကို ၀ ယ်ပါ - သကြားလုံးပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းပါ
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇန်နဝါရီလ 8, 2021 ဇန်နဝါရီလ 8, 2021 လက်ကားနှင့် B2B သုံးသပ်ချက်များ	မှတ်ချက် Leave
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်သင်၏တစ်နေရာတည်းလက္ကားရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသည့်ကွန်ယက်အတွေ့အကြုံသည် ၀ ယ်လိုအား၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပစ္စည်းများနှင့်သင်၏စတိုးဆိုင်များကိုပြည့်ဝစွာသိုလှောင်ရန်အလွန်ကောင်းသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ပြိုင်ဆိုင်မှုကိုဘယ်လောက်အထိခံရပ်နိုင်မှာလဲ။ Shop The Globe နှင့် eBay နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကလူကြိုက်များသောပစ္စည်းများကိုသင်မည်သို့သိမ်းဆည်းနိုင်သည်ကိုပြသရန်စျေးဝယ်ခြင်းအချို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အရင်းအမြစ်များဂလိုဘယ်နှင့်ရှာဖွေမှုများကိုဝယ်ယူသည့် UK လက်ကားရောင်းသူများနှင့် B2B လက်ကားဝက်ဘ်ဆိုက်ကသင့်အားအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇန်နဝါရီလ 7, 2021 ဇန်နဝါရီလ 6, 2021 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
အကယ်၍ သင်သည်အသက် ၂၀ ရှိတဲ့လမ်းညွှန်စာရင်းကိုရှာဖွေနေတယ်၊ ယူကေဗြိတိန်လက်ကားရောင်းဝယ်ရေး သင်၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည် အကယ်၍ သင်သည်လက္ကားဝယ်သူများသို့မဟုတ်ရောင်းသူအများစုကဲ့သို့အလွန်ကောင်းသောရှာဖွေမှုစွမ်းရည်ကိုပေးနိုင်သည့်တစ်နေရာတည်းတွင်ရှိသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်တည်နေရာကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုလျှင်၎င်းသည်ဆိုလိုသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်.
Coronavirus - ဂျာမနီသည်ဆောင်ရွက်ချက်များကိုမြင့်တက်စေသဖြင့်တင်းကျပ်သည်
ဇန်နဝါရီလ 6, 2021 ဇန်နဝါရီလ 6, 2021 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
ဂျာမနီသည်လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးနှင့်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်များဖြင့်ရက်သတ္တပတ်များစွာရင်ဆိုင်ရသည်။ အစားအစာမဟုတ်သည့်ဈေးဆိုင်များ၊ အရက်ဆိုင်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အပန်းဖြေနေရာများနှင့်ကျောင်းများကိုပိတ်ရန်ဖက်ဒရယ်အစိုးရနှင့်နိုင်ငံ၏ပြည်နယ် ၁၆ ခုမှအမှုဆောင်များကအင်္ဂါနေ့တွင်သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့သည်။
ရုရှားသည်လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံထားရသောအီရန်ဗိုလ်ချုပ် Qasem Soleimani အားစစ်ဘက်ခန်းမအတွင်းသို့ထပ်မံထည့်သွင်းခဲ့သည်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇန်နဝါရီလ 4, 2021 ဇန်နဝါရီလ 4, 2021 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
အယ်လ်စိုင်းအယ်လ်အဟီရာ (The Last Sourhour) အမည်ရမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်သစ်သည်ရုပ်သံမှထုတ်လွှင့်ခဲ့သည် Al-Mayadeen ချန်နယ် Al Mayadeen ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ထိုချန်နယ်သည်အယ်လ်ဂျာဇီးရားနှင့်အယ်လ်အာရေဗျတို့၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုလျှော့ချရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဒီလမ်းကြောင်းကိုလက်ဘနွန်၊ ဘေရွတ်မှာအခြေစိုက်တယ်။
ဂျာမနီ - ဥပဒေပြုသူများသည်သုံးပတ်ပိတ်ဆို့မှုသက်တမ်းတိုးရန်အကြံပြုသည်
ဇန်နဝါရီလ 3, 2021 ဇန်နဝါရီလ 3, 2021 Joyce Davis က	မှတ်ချက် Leave
ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှင့်သေဆုံးမှုနှုန်းမြင့်တက်နေခြင်းကိုဂျာမနီနိုင်ငံကပိတ်ဆို့တားဆီးသည့်အဆင့်သည်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ။ သော့ပိတ်ဆို့မှုကိုဇန်နဝါရီလအကုန်တွင်အဆုံးသတ်မည်ဖြစ်သည်, Bavarian ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် Markus Soder ကဂျာမန်ထုတ်ဝေရေး Bild ကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကကြေငြာခဲ့သည်။
နော်ဝေကုမ္ပဏီသည် Nord Stream2ကိုအတည်ပြုရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်
ဇန်နဝါရီလ 3, 2021 ဇန်နဝါရီလ 3, 2021 Doris Mkwaya	မှတ်ချက် Leave
နော်ဝေကုမ္ပဏီ Det Norske Veritas မှပိုက်လိုင်းအပေါ်အမေရိကန်၏ပိတ်ဆို့မှုများကိုရုပ်သိမ်းသည့်တိုင်အောင် Nord Stream2အားအတည်ပြုရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ Nord Stream2ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းသည်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သည့်လက်မှတ်မရရှိပါDet Norske Veritas အရ၎င်း၏လည်ပတ်မှုကိုစတင်ရန်လိုအပ်သည်။
Globally မှထုတ်လုပ်သူများထံမှတိုက်ရိုက် ၀ ယ်ယူပါ။ Shop the Globe
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇန်နဝါရီလ 3, 2021 ဇန်နဝါရီလ 2, 2021 လက်ကားနှင့် B2B သုံးသပ်ချက်များ	မှတ်ချက် Leave
လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကပင်စဉ်း စား၍ မရနိုင်သောနည်းလမ်းများဖြင့်အင်တာနက်သည်လူ့အတွေ့အကြုံကိုဒီမိုကရေစီနည်းဖြင့်ကျင့်သုံးခဲ့သည်။ အားကစားရမှတ်များမှစတော့ရှယ်ယာအကြံပေးချက်များအထိသတင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုလက်ချောင်းထိပ်တွင်ချက်ချင်းရရှိနိုင်သည်။ အဆက်အသွယ်အသစ်များနှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးခြင်းများကိုပုံဖော်။ အတိတ်ကလောင်အမည်များကိုတပြိုင်နက်တည်းဖြစ်စေသည်။ ဒါကကုန်သွယ်ရေးကမ္ဘာအထိပါ။
ဂျာမနီကကမ်းလှမ်းသင့်သည်၊ Navalny Accept, Asylum?
ဇန်နဝါရီလ 1, 2021 ဇန်နဝါရီလ 1, 2021 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
လွတ်လပ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအတွက်ဂျာမန် Bundestag မှအဖွဲ့ဝင် Renata Alt သည်ရုရှားအတိုက်အခံဘလော့ဂါ Alexey Navalny အားနိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ပေးရန်အချိန်တန်ပြီဟုယုံကြည်သည်။ ဒီကမ်းလှမ်းမှုဟာရုရှားစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မတီ (ICR) ကရုရှားအတိုက်အခံအပေါ်ရာဇ ၀ တ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုစတင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။
12...9ပို့စ်အဟောင်းများ